Ahoana ny fomba hampijanonana ny alika tsy hibontsina | Tontolo alika
Indraindray ny fihomboan'ny alika dia mety hahasosotra tokoa, ary raha manana mpifanolobodirindrina amintsika isika dia mety hiteraka olana ihany koa. Fa aleo tezitra amin'ilay biby ary raiso toy ny tsy tokony hataontsika, Zava-dehibe tokoa ny hijanonantsika sy hieritreretantsika ny antony mahatonga azy hitolaka. Io fomba io ihany no ahafahantsika misoroka ireo toe-javatra mety tsy dia tiantsika loatra.
Ka raha te hahalala ianao ny fomba hanakanana ny alikako tsy hibontsina, amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka momba an'io lohahevitra mahaliana momba ny fiteny manokana an'ny alika io isika.
Alohan'ny hanombohantsika dia misy zavatra tiako holazaina aminao izay heveriko fa tena zava-dehibe: tsy afaka manana alika tsy mivovo amin'ny fiainany ianao. Barking no fomba am-bava ataon'izy ireo handefasana hafatra, na amin'ny biby hafa na amin'ny tenantsika. Marina fa misy ny alika izay mivovo kely fotsiny, ary misy ny hafa be resaka kokoa, nefa izy rehetra dia samy mamoaka avokoa. Na izany aza, Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hibontsina be?
Tsotra ny valiny nefa sarotra amin'ny fotoana iray ihany: mihaino azy. Fantatro fa tamin'ity dia toa tsy nilaza na inona na inona aho, saingy tokony ho fantatrareo fa isaky ny hodi-kazo dia tsy miteny zavatra izy. Ohatra, raha miala ao an-trano fotsiny ianao ary raha vao manidy ny varavarana ianao dia mivovo dia miteny aminao izy hiverina aminy; Raha vao nahita namana iray ianao ary mivazavaza aminy amin-kadalana miaraka amin'ny fahasambarana mihodina amin'ny rambony am-pifaliana, dia milaza aminy izy fa te hilalao aminy. Farany, tsy maintsy dinihinao ny toe-javatra tsirairay mba hahalalanao ny antony mampivonto azy sy ny hafatra ampitainy.
Fetsy na fomba hampihenana ny fivoahan'ny alika dia misy maromaro, izay ny fanatanjahan-tena ara-batana sy ara-tsaina, mandany fotoana miaraka aminy, ary mamela azy hifanerasera amin'ny alika, olona, ​​saka, ... Raha mandeha mitsangatsangana isika na, tsara kokoa, raha mihazakazaka mihazakazaka amin'ny namantsika isika, raha manararaotra ny ora maro lanintsika miaraka aminy, ary raha mitondra azy koa isika avy amin'ny alika kely mankany amin'ny toerana misy biby hafa sy olona hafa , ny alika dia ho tony kokoa ary, ambonin'izany rehetra izany, faly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampijanonana ny alika tsy hibontsina
Holland, firenena voalohany tsy misy alika nilaozana
Torohevitra hikarakarana ny sofin'ny alikao